DOWNLOAD VIBER NA RUSSIAN NA KỌMPUTA GỊ - MMEMME NYOCHA - 2019
MPC Cleaner bụ usoro free nke na-agwakọta ọrụ nke ihichapu usoro site na irighiri ihe na ichebe PC ọrụ site na egwu egwu na nje virus. Nke a bụ ọnọdụ ndị mmepe ngwaahịa a. Otú ọ dị, enwere ike ịwụnye ngwanrọ n'enweghị ihe ọmụma gị ma mee omume ndị achọghị na kọmputa. Dịka ọmụmaatụ, ndị nchọgharị gbanwere ihu mmalite, ozi dịgasị iche iche na-enye echiche na "hichaa usoro ahụ," yana akụkọ na-amaghị ama na-egosipụta mgbe niile na ngọngọ dị iche na desktọọpụ. Isiokwu a ga-enye ozi gbasara otu esi ewepụ ihe omume a na kọmputa gị.
Wepu MPC Cleaner
Dabere na omume nke usoro ihe omume ahụ mgbe ọ nwụsịrị, ị nwere ike ịkọ ya dịka AdWare - "nje virus mgbasa ozi". Nsogbu ndị dị otú ahụ anaghị eme ihe ike na usoro ahụ, ha adịghị ezu ohi data onwe ha (maka ọtụtụ akụkụ), ma o siri ike ịkpọ ha uru. Ọ bụrụ na ị wụnyeghị MPC Cleaner onwe gị, ihe ngwọta kasịnụ ga-abụ ịhapụ ya ngwa ngwa o kwere omume.
Hụkwa: Ịlụso nje virus mgbasa ozi ọgụ
Ị nwere ike iwepu "onye ulo" achọghị na kọmputa na ụzọ abụọ - iji software pụrụ iche ma ọ bụ "Ogwe njikwa". Nhọrọ nke abụọ na-enyekwa maka ọrụ "pensụl".
Usoro 1: Mmemme
Ụzọ kachasị dị irè isi wepu ngwa ọ bụla bụ Revo Uninstaller. Usoro a na-enye gị ohere ihichapu faịlụ niile na igodo ndekọ ndị fọdụrụ na usoro ahụ mgbe ịchọtara ọkọlọtọ. E nwere ngwaahịa ndị yiri ya.
Gụkwuo: 6 ngwọta kachasị mma maka mwepụ zuru ezu nke mmemme
Anyị na-amalite Revo ma anyị na-ahụ na ndepụta anyị wrecker. Anyị pịa PKM na ya ma họrọ ihe ahụ "Hichapụ".
Na mpio window MPC Cleaner pịa njikọ ahụ "Wepụ ozugbo".
Ọzọ, họrọ nhọrọ ọzọ. Wepụ.
Mgbe onye ntinyeghi ihe mezue ọrụ ya, họta ọnọdụ dị elu na pịa Iṅomi.
Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ niile"na mgbe ahụ "Hichapụ". Omume a anyị bibiri igodo ndekọ ndị ọzọ.
Na window ọzọ, megharịa usoro maka nchekwa na faịlụ. Ọ bụrụ na enweghi ike ihichapụ ihe ụfọdụ, pịa "Emere" ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Biko rịba ama na enwere ike itinye ihe ndozi ọzọ MPC AdCleaner na MPC Desktọpụ na onye ahịa. Okwesiri ka ewepu ha n'otu uzo, ma oburu na o meghi ya.
Enwere ike iji usoro a mee ihe ebe ọ bụ n'ihi ihe kpatara na ọ gaghị ekwe omume ime nchịkọta iji Revo Uninstaller. Ụfọdụ omume rụrụ Revo na ọnọdụ akpaka, anyị ga-arụ ọrụ aka. Site n'ụzọ, ụzọ dị otú ahụ dị irè site na echiche nke ịdị ọcha nke nsonaazụ ahụ, ebe mmemme nwere ike ịchọta ụfọdụ "ọdụ".
Meghee "Ogwe njikwa". Ịnweta ụwa - malite menu "Gbaa ọsọ" (Gbaa ọsọisi nchikota Nweta + R ma tinye
Chọta na listi applets "Mmemme na Ngwa".
Push PCM ka MPC Cleaner ma họrọ otu ihe. "Hichapụ / gbanwee".
Uninstaller meghere, nke anyị na-emeghachi usoro 2 na 3 nke ụzọ gara aga.
Ị nwere ike chọpụta na na nke a, ntinye ọzọ abụrụ na ndepụta ahụ, n'ihi ya, ọ dịkwa mkpa ka ewepụ ya.
Mgbe ịmechara arụmọrụ niile, ị ghaghị ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
A ghaghị ịrụ ọrụ ọzọ iji wepu igodo ndekọ na faịlụ ndị ọzọ fọdụrụnụ.
Ka anyi malite site na faịlụ. Mepee folda ahụ "Kọmputa" na desktọọpụ na n'ọhịa ọchụchọ "MPC Cleaner" enweghị nzacha. A na-ehichapụ nchekwa na faịlụ na - PCM - "Hichapụ").
Tinyegharịa nzọụkwụ na MPC AdCleaner.
Ọ na-anọgide na-ehicha ndekọ nke igodo ahụ. Iji mee nke a, ị nwere ike iji software pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, CCleaner, ma ọ ka mma ime ihe niile aka. Mepee edito ederede site na menu Gbaa ọsọ iji iwu ahụ
Nzọụkwụ mbụ bụ iwepụ ihe fọdụrụnụ nke ọrụ ahụ. MPCKpt. Ọ dị na alaka ụlọ ọrụ ahụ:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet ọrụ MPCKpt
Họrọ mpaghara kwesịrị ekwesị (folda), pịa Gbanyụọ ma gosi nhichapụ.
Mechie alaka niile ma họrọ ihe kachasị elu na aha ahụ. "Kọmputa". A na-eme nke a ka engine search wee malite ịgụgharị ndekọ ahụ site na mmalite.
Ọzọ, gaa na menu Dezie ma họrọ "Chọta".
Tinye n'ime windo ọchụchọ "MPC Cleaner" n'enyeghị nkọwa, tinye akọrọ, dị ka e gosipụtara na nseta ihuenyo ma pịa bọtịnụ ahụ "Chọta ọzọ".
Hichapụ igodo ahụ achọta iji igodo Gbanyụọ.
Jiri nlezianya lelee igodo ndị ọzọ na ngalaba ahụ. Anyị na-ahụ na ha na-esokwa n'usoro ihe omume anyị, ya mere ọ nwere ike wepụ ya kpamkpam.
Gaa n'ihu na-achọ isi F3. Na ihe niile achọtara anyị na-eme ụdị omume ahụ.
Mgbe ihichapu igodo niile na nkewa, ị ghaghị ịmalitegharịa igwe. Nke a mezuga mwepụ nke MPC Cleaner si na kọmputa ahụ.
Ihichapu kọmputa gi site na nje na ngwa ndi ozo a choro adighi nma. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji lekọta nchekwa nke kọmputa ma ghara ikwe ka ịbanye n'ime usoro nke ihe ekwesịghị ịbụ ebe ahụ. Gbalịa ka ị ghara ịwụnye mmemme ndọpụtara site na saịtị ndị a na-enyo enyo. Jiri nlezianya na-eji ngwaahịa n'efu, dịka ha na ha nwere ike ịnweta "ndị njem ticketless" n'ụdị onye dike taa.